कांग्रेसले कसैको हातखुट्टा भाँचेको छैन, ढुक्क हुनुहोस् बहुमत आउँछः देउवा - TV Annapurna
December 5, 2017 December 5, 2017 Annapurna TV
प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको दोस्रो चरणको निर्वाचनको तयारी सकेर मौन अवधि शुरु भएको छ । मौन अवधिको पूर्वसन्ध्यामा निर्वाचन र नेपाली काँग्रेसको भावी रणनीतिका बिषयमा टिभी अन्नपूर्णका लागि अन्नपूर्ण रिपोटर्र राजु सुबेदीले गरेको बिशेष कुराकानीको केही अंश
यो निर्वाचनको दौरानमा के देख्नुभयो के चाहन्छन् मतदाता ?
नेपाली काँग्रेसको माहोल एकदमै राम्रो छ । जनताले विकास र लोकतन्त्र चाहेका छन् । लोकतन्त्र बलियो होस् आर्थिक विकास होस् भन्ने उनीहरुको चाहना छ । यसको लागि नेपाली काँग्रेसले जित्नुपर्छ नेपाली काँग्रेसको सरकार बन्नुपर्छ भन्ने छ ।
यसको अर्थ तपाईको बहुमत आउने अवस्था छ ? कति सिट जित्नुहुन्छ ?
हो नेपाली कांग्रेसले पूर्ण बहुमत ल्याउँछ । जनताले बुझेका छन् । विकास गर्ने र लोकतन्त्र संरक्षण गर्ने पार्टी नेपाली कांग्रेस हो । कम्युनिस्टले विकास गर्दैनन् । उनीहरु जनता गरिब भइरहून् भन्ने चाहन्छन् । राष्ट्रपतीय शासन चाहने भनेको जनताको अधिकार खोस्ने हो । यसकारण यति सङख्यामा सिट आउछ भन्दा नि काँग्रेसको स्पष्ट बहुमत आउछ भन्ने बुझ्नुहोस् ।
बाम गठबन्धन सशक्त देखिएको अवस्थामा काँग्रेसको बहुमत आउने आधार के हो ?
हामीले जनतालाई दुःख दिएका छैनौं । जबरजस्ती चन्दा असुल गरेका छैनौं । कसैका हातखुट्टा भाँचेका छैनौं । कांग्रेस जनतालाई सार्वभौम सत्तासम्पन्न बनाउने पार्टी हो, जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउने पार्टी हो, जनतालाई मालिक बनाउन चाहने पार्टी हो । जनतालाई मतद्वारा सरकार बनाउने र बदल्ने अधिकार छ । म यो देशको निम्ति लडेर हिडेको व्यक्ति हुँ, यो संविधान कार्यान्वयन गर्न म सफल भएको छु । राम्रो संविधानको कार्यान्वयन नेपाली कांग्रेसबाहेक अरु कसले गर्न सक्यो, वाम गठबन्धनले जितेमा यो संविधान च्यातिन्छ, दलितका अधिकार खोसिन्छन् , महिलाका अधिकार खोसिन्छन् , जनताले बुझेका छन् अनि वामपन्थीलाई कसले मतदान गर्छ ? हाम्रो बहुमत आउँछ । देशमा विकास पनि नेपाली कांग्रेसले गरेको छ । पहिले एक एयरलाइन्स थियो, अहिले कति धेरै छन् ? पहिले एक मेडिकल कलेज थियो, अहिले कति धेरै छन् ?विश्वविद्यालय, क्याम्पस खुलेका छन् । बाटोघाटो बनेको छ । महाकाली सन्धि मैले गरेको हुँ । केपी ओलीले पनि हस्ताक्षर गरेका छन् । महाकाली सन्धि कार्यान्वयन हुने पक्षमा छ । टनकपुरबाट नहर आउने भएको छ । सबै विकास कांग्रेसले गरेको हो, कम्युनिस्टले के विकास गरेका छन् ? जनताले नेपाली कांग्रेसलाई मत हाल्छन् र हाम्रो बहुमत आउँछ ।
यसको अर्थ तपाई फेरि प्रधानमन्त्री बन्दै हुनुहुन्छ ?
हो नेपाली कांग्रेसको बहुमत आउने पक्का भईसक्यो अब यसलाई कसैले रोक्न सक्दैन । त्यसकारण म अबको प्रधानमन्त्री हुँ । म ढुक्क छु म अब बहुमतको प्रधानमन्त्री बन्दैछु ।
प्रचण्डले केपी आलीलाई अबको प्रधानमन्त्रीको रुपमा घोषणा गरिसक्नुभयो त ?
प्रचण्डले घोषणा गरेर हुने को हो वहाँ ? जनताले मत दिनुपदैंन ? जनताले मत नदिएपनि केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने क्षमता राख्छन प्रचण्डले ? तपाई भन्नुस त कसले दिन्छ कम्युनिष्टलाई भोट ?
हल्ला त यसपटक शेर बहादुर देउवा आफैले चुनाव हार्ने अवस्था छ भन्ने छ त , तपाई चुनाव जित्नेमा विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
कसले भन्यो ओलीजीले हल्ला गरेर हुन्छ ? यसपटक मात्रै होईन म डँडेल्धुरामा यसअघि नै ५ भन्दा बढी पटक जनताको माया पाएको छु । डँडेल्धुरामा मैले विकास गरेको छु । अरु जितेमा माननीय मात्र हुने हुन् । मैले जितेमा प्रधानमन्त्री हुने हुँ । चारपटक प्रधानमन्त्री भइसकेको छु । सुदूरपश्चिममा म बाहेक प्रधानमन्त्री हुने अरु को छ ? मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिममा प्रधानमन्त्री हुने मै हुँ । यसकारण यसपटक मैले भारी अन्तरले चुनाव जित्नेमा शंका छैन । हल्ला त कम्युनिष्टहरुले जे पनि गर्छन यस्तो कुरा गर्ने तपाई ?
तपाई यो देशको प्रधानमन्त्री गृह मन्त्रालयको जिम्मा पनि तपाईँकै हातमा छ । देशभर भएका बम र बारुदका घटनाले सुरक्षाव्यवस्थाबारे त धेरै प्रश्न उब्जियो त ?
होईन सबै ठिक छ । निर्वाचन हो निर्वाचनका बिषयमा केही असन्तुष्टहरुले त आफ्ना असन्तुष्टिहरु राख्छन नै यसलाई असुरक्षा भन्ने कहाँ के भयो ल भन्नुस त? असुरक्षा यो सब कम्युनिष्टको हल्ला हो । केपी ओलीले शेरबहादुरले निर्वाचन सार्दैछ भनेको भन्यै गरे । उनले सपना पनि चुनाव सारेको देखे । मेरो काम नै चुनाव गराउने थियो । मैले चुनाव गराएरै छाडें । अब मंसिर २१ गते मतदान भएपछि संविधान पूर्ण कार्यान्वयन भएर देश अघि बढ्छ । चुनाव बिथोल्न केही तत्वले षड्यन्त्र गरिरहेका छन् । मतदान हुन नदिन, चुनाव बिथोल्न षड्यन्त्र गरे पनि सरकार शान्तिपूर्ण र सुरक्षित वातावरणमा चुनाव गराउन कटिबद्ध छ । शान्तिसुरक्षा दिन सुरक्षा निकाय सक्षम छ ।
तपाई कसले गर्याे भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ षडयन्त्र ? कतै बामगठबन्धन माथिको शंका त होईन नि ?
चुनाव बिथोल्न षड्यन्त्रमा अरु पनि सहभागि छन । तर अहिले विप्लव माओवादीले यस्तो कार्य गरेको हो । ठाउँ ठाउँमा बम पड्काएर त्रास उत्पन्न गर्न खोजेको छ । सुरक्षाको प्रत्याभूति गराएर निर्धक्कसँग भयरहित वातावरणमा चुनाव गराउन सरकार लागेको छ । कसैले पनि कुनै द्विविधा नमानी, कुनै शंका नगरी निर्धक्क र ढुक्कसँग मतदान गर्ने वातावरण बनाउँछु । बामपन्थीहरु पनि यो सरकार चुनाव गराउन नसकोस् भन्नेमा थिए । तर निर्भयका साथ पहिलो चरणको निर्वाचनमा मतदाता उत्साहित रुपमा सहभागी भए । यो पटक पनि सहभागी हुनेछन ।
निर्वाचन भाँड्ने गलत तत्व भनेर पहिचान गरिसक्नुभएको रहेछ , खैं त कारबाही त भएको छैन भन्ने छ नी ?
सरकारले कारबाही गरेको छ । धेरै मान्छे पक्राउ गरेका छौं । अरुलाई पनि पक्राउ गर्छौं । चुनाव बिथोल्ने तत्वलाई छाड्दैनौं ।
तपाई केही चुनावी कार्यक्रममा बामपन्थीले बहुमत ल्याए सविधान नै बदल्छन जनतालाई बसिखान हुन्न भन्नुभयो के भन्न खोज्नुभएको ?
उनीहरुले बहुमत ल्याएर संविधान बदल्छन् भनको होइन, मैले उनीहरुको नियतको कुरा गरेको हुँ । उनीहरुको नियतको कुरा जनतालाई भन्नुप¥यो नि । दलित, जनजाति, महिला सबैलाई अधिकार दिएको यो संविधान बदल्ने उनीहरुको चाहना हो । यो मैले होईन ,उनीहरु आफैंले बहुमत ल्याएर संविधान संशोधन गर्छु भनिरहेका छन् ।
चुनावमा सरकारकै मान्छेबाट आचारसंहिता पालना भएन भन्ने कुरा सत्य हो ?
होईन , म बाट आचारसंहिता उल्लंघन भएको छैन । सरकारबाट पनि आचारसंहिता उल्लंघन भएको छैन । आचारसंहिताको सरकारले पूर्ण पालना गरेको छ ।
तपाईमाथि भारतपरस्तको आरोप छ नि ?
त्यो आरोप छाड्नुस् कम्युनिष्ट अतालिएपछि जे पनि बोल्छन् । ओलीजी हो भारतपरस्त , प्रचण्ड हो भारतपरस्त अनि मलाई भनेर हुन्छ ? जे पायो त्यही भन्नु त भएन नी । नेपाली कांग्रेस भारत र चीन दुवै देशसँग राम्रो सम्बन्ध राख्न चाहन्छ । कसैसँग नजिक हुने र कसैसँग टाढा हुनु देशको हित र राष्ट्रिय स्वार्थका लागि पनि राम्रो हँुदैन भन्ने हामीले बुझेको छैनौ ? यत्रो लडाई लडेर आएको नेपाली काँग्रेसले बुझेको छैन ? आरोप त के के छ ,के के छ ।
अन्त्यमा भन्नहोस् नेपाली कांग्रेसलाई भोट किन दिने ?
विकासका लागी दिने । जनताको मुक्तिका लागी दिने । समृद्धिका लागी दिने । मधेशी थारु मुस्लिम सबैको अधिकारको लागि दिने । नेपाली काँग्रेस बाहेकले यो देशको विकास गर्न सक्दैनन् यहि कारण दिने । कम्युनिष्टलाई भोट किन दिने ? अब जनताले नेपाली काँग्रेसलाई भोट दिन्छ । नेपाली काँग्रेसको बहुमतको सरकार बन्छ अनि बल्ल यो देशको विकास हुन्छ ।
वाम गठबन्धन १४५ सिटमा विजयी हुने पक्का, काँग्रेसको कति ? बाहिरियो यस्तो रिपोर्ट
गुल्मीबाट आयो अनौठो खबरः मन्दिरबाटै गरियो मदिरा बरामद
One thought on “कांग्रेसले कसैको हातखुट्टा भाँचेको छैन, ढुक्क हुनुहोस् बहुमत आउँछः देउवा”
नेताजी तपाइलाई असकक्षम तेसै भनिएको होइन रहेछ……के तालको कुरा हो यो आफ्नो कार्यकर्ता र जनतालाई झुटो आस्वासन दिने…..??? काँग्रेसले कसैको हात खुट्टा नभाँचेको भन्दैमा बहुमत आउंछ, ढुक्क भए हुन्छ भन्दिने……??? काँग्रेसले कुनै बेक्ती को हात खुट्टा नभाँचेको होला, तर यो देश र यो देश चलाउने हरेक सिस्टमलाई कोमामा पुराउने पार्टी त् काँग्रेस नै हो नि……!!! काँग्रेसले कसैको हात खुट्टा भाँचेको त् छैन नै होला, तर नेपाली सपाङ्ग जनतालाई भारत संग लाचार हुँदै अपाङ्ग सरि जबर्दस्ती भर पर्न पर्ने गरि घिनलाग्दो राजनीति गर्नी पार्टी त् काँग्रेस नै हो नि फेरि….!!! यी कुरा नेपाली जनताले राम्ररी देखि बुझी सकेका छन्, तेसैले मनको लड्डु घीउसंग खांदा त् हुन्छ, तर डकारेर ओरिपारिका नेपाली जनतालाई छेउमा बस्नै नसक्ने गरि उद्धुम चाही नमचाउनु होला है……